Shiinaha Dufcaddii Nooca Qashinka Turoskii Warshad Warshad Pyrolysis | LYBH
1. Si buuxda u fur albaabka: rakibo habboon oo dhakhso leh, qaboojin degdeg ah, silig ku habboon oo dhakhso leh.
2. Qaboojinta qaboojiyaha Heerka waxsoosaarka saliidda ee sarreeya, tayada saliidda ee wanaagsan, adeegga muddada dheer iyo nadiifinta fudud.
3. Nadiifinta qaabka biyaha asalka ah iyo ka saarista boodhka: Waxay si wax ku ool ah uga saari kartaa gaaska aashitada iyo boodhka, waxayna la kulmi kartaa heerarka qaran ee la xiriira.
4. Ka saarida daadinta bartamaha albaabka foornada: hawo la'aan, ka bixid otomaatig ah, nadiif ah oo aan boodh lahayn, waqti badbaadin ah.
5. Amniga: tiknoolajiyada alxanka qotoma ee otomaatigga ah, tijaabinta aan wax burburin, qalabka gacanta iyo aaladaha otomaatiga ah.
6. Nidaamka soo kabashada gaaska qiiqa: si buuxda u gubtay ka dib soo kabashada, keydinta shidaalka iyo ka hortagga wasakheynta.
7. Kuleylka tooska ah: Nidaamka qaaska ah wuxuu kordhiyaa aagga kululaynta reaktorka, heerkulku si dhakhso ah ayuu u kacayaa, heerkulkuna waa fududahay in la xakameeyo, si wax ku ool ahna u kordhiya nolosha adeegga qalabka.
8. Naqshadeynta qolofka kuleylka kuleylka ah ee gaarka ah: Saamaynta kuleylka kuleylka ee aadka u fiican, saamaynta keydinta tamarta wanaagsan.
The taayir dhanwaxaa loo qaadaa fal-celinta pyrolysis iyada oo loo marayo moduleka wax lagu rakibo, daboolka si otomaatig ah ayaa loo xiraa loona xiraa, ka dibna taayirka oo dhan ayaa pyrolyzed ah; daaweynta pyrolysis ka dib, uumiga saliida waa la sifeeyaa, saliida iyo gaaskuna waxay maraan aaladda kala soocida saliida fudud iyo culus. Saliida iyo gaasku waxay galaan nidaamka isu keenida, qaybta liquefiable-ka ayaa lagu soo koobay saliida taayirka, qaybta aan la dareemi karinna waxay kujirtaa nidaamka kuleylka si loogu gubo nidaamka nadiifinta gaaska. Ka dib marka la dhammeeyo geeddi-socodka saliidda iyo gaaska pyrolysis, siligga kaarboon madow iyo birta hadhay ayaa si otomaatig ah looga sii daayaa iyada oo loo marayo nidaam dheecaan siibaysan oo toos ah u socda.
1. Falanqeeyaha 'pyrolysis reactor' wuxuu qaadanayaa qaab dhismeedka jirka keydinta kuleylka si uu si buuxda dib ugu warshadeeyo kuleylka qashinka, taas oo aan dheereyn karin nolosha adeegga foornada weyn, laakiin sidoo kale badbaadin karta shidaalka.
2. Dheriga gaarka ah ee cadeynta heerkulka sare ee la oggol yahay ayaa loo adeegsadaa fal-falanqeeyaha.
3. Qalabkan waxaa lagu qalabeeyaa digniinta infrared-ka iyo qashin qodida, taas oo ogaan karta ifafaalaha dhuunta dhuunta ee wax soo saarka isla markaana si otomaatig ah u xalin karta dhibaatada xayiraada, si loo hubiyo in aysan jiri doonin dhibaato xaga amaanka ah oo ay ugu wacan tahay dhuumaha. habka wax soo saarka.
4. Qaab dhismeedka wareegga laba-geesoodka ah ayaa lagu ansixiyay nidaamka dib-u-dejinta, kaas oo xakameynaya waqtiga qashin-qubka ee ku saabsan saacadaha 2.
5. Ansixi nidaam cusub oo lagu nadiifiyo gaaska qiiqa si loo sameeyo gaaska la siidaynayo ka dib marka la nadiifiyo ka dib marka uu la kulmo heerarka wasaqda qaran ee khuseeya
6. Fuuqbax ka dib, ka saarida baaruudda iyo ka saarista wasakhda nidaamka nadaafadda, gaaska guban kara ee dheeraadka ah ayaa lagu cadaadiyey kombaresarada gaaska gaarka ah waxaana lagu keydiyaa haanta keydka gaaska. Waxaa loo isticmaali karaa kuleylinta hadhow, ama waxaa la siin karaa koronto-dhaliyeyaasha gaaska ku shaqeeya si ay u isticmaalaan ama u iibiyaan.
7. Ku dar hawo qaadista iyo qalabka qaboojinta degdegga ah foornada weyn, si heerkulka foornada weyn loo yareeyo wax ka hooseeya 100 darajo 2 saacadood.
Dufcaddii Nooca dhirta pyrolysis
24-saac soo saarida saliida
Kuleylka tooska ah
cadaadiska caadiga ah
Booska dabaqa (taangiga)
1. Qalabka Caydhiin Ee Mashiinka Pyrolysis-ka ah
2. Dhamee boqolkiiba wax soo saarka iyo isticmaalkiisa
* Si toos ah ayaa loo iibin karaa.
* Wuxuu isticmaali karaa qalabka sifeeya si uu u helo baatrool iyo naaftada.
* Waxaa loo isticmaali karaa shidaal ahaan.
* Qalabka turxaan bixinta kaarboon kaarboon waxaa loo isticmaali karaa in laga dhigo kaarboon madow oo madow.
* Qalabka kaarboonka kaarboonka madow ayaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo walxo.
* toos baa loo iibin karaa.
* Mashiinka baalleeyaha ee loo yaqaan 'Hydraulic baling machine' ayaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo bir bir ah oo loogu talagalay gaadiidka iyo keydinta.
* Waxaa shidaal ahaan loogu isticmaali karaa gubiyaha.
* Gaaska qashinka badan waxaa lagu keydin karaa nidaamka keydinta.
3. Shidaalka la heli karo ee loogu talagalay ka shaqeynta pyrolysis
Saliida (saliida shidaalka, saliida taayirka, saliida culus iwm.)
Mashiinka madow ee kaarboon
b. Dhammaan alxanka waxaa lagu ogaan doonaa habka tijaabada ee nondestructive ultrasonic si loo hubiyo tayada alxanka iyo qaabka alxanka.
d. Waxaa lagu rakibay aaladda ka hortagga qarxa, filtarka badbaadada, filtarka degdegga ah, cadaadiska iyo mitirka heerkulka, iyo sidoo kale nidaamka cabsida leh.
d. Wasakhda adag: adag ee ka dambeeya pyrolysis-ka waa fiilooyinka kaarboonka madow iyo birta ceyriinka ah oo si qoto-dheer loo shaqeyn karo ama si toos ah loogu iibin karo qiimaheeda.
Hore: Qashinka Sii Daaya Pyrolysis Plant
Xiga: Qiimaha Warshadda Shiinaha Isugaynta Taayirada Qashinka Rubber Recycling Pyrolysis Plant 50tpd oo Sii Socda
Dufcaddii Pyrolysis Plant
Warshad Pyrolysis joogto ah
Qalabka Burburinta Qalabka Rubber
Geedka Pyrolysis-ka ee Bay'adda u Wanaagsan
Pyrolysis-ka Bay'adda u roon ee Rubber
Geedka Pyrolysis-ka oo Sii Socda
Khadadka Waxsoosaarka Budada
Dib-u-warshadaynta Taayirada Pyrolysis
Tire Tredding Palnt
Mashiinka Goynta Taayirada
Taayirada Mulch Recycle Palnt
Dib-u-warshadaynta Taayirada Palnt
Mashiinka Dib-u-warshadaynta Taayirada Qashinka
Qashinka Qashinka Dib-u-warshadaynta Pyrolysis
Dufcaddii Pyrolysis Plant, Sifee caag ah, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Caaga, Warshad Pyrolysis joogto ah, Taayirada Pyrolysis, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Taayirada Qashinka,